Eksodho 20:12—“Kudza Baba Vako Naamai Vako”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiTetun Dili Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish Frafra French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikongo ya Leta Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Oromo Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Waray-Waray Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Eksodho 20:12—“Kudza Baba Vako Naamai Vako”
“Kudza baba vako naamai vako, kuti urarame kwenguva refu panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako.”—Eksodho 20:12, Bhaibheri—Shanduro Yenyika itsva.
“Kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako.”—Eksodho 20:12, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.
Zvinorehwa naEksodho 20:12
Mwari akarayira vaIsraeri kuti vakudze vabereki vavo. Pane zvakanaka zvaakavaudza zvaizoitika kwavari, kana vaizoteerera murayiro uyu. Kunyange zvazvo vaKristu vasisiri pasi pamutemo waMozisi, maonero aMwari haana kuchinja. VaKristu vachiri kuwana zvidzidzo zvinokosha paMutemo iwoyo.—VaKorose 3:20.
Kubva vachiri vadiki, kunyange pavanokura, vana vanoratidza kuti vanokudza vabereki vavo pavanovateerera uye kuvaremekedza. (Revhitiko 19:3; Zvirevo 1:8) Kunyange pavanenge vava nemhuri dzavo, vana vanofanira kuramba vachibatsira vabereki vavo kuratidza kuti vanovada. Semuenzaniso, vana vanofanira kuchengeta vabereki vavo pavanenge vakwegura.—Mateu 15:4-6; 1 Timoti 5:4, 8.
Mumutemo waMozisi vana vaifanira kukudza vese vari vaviri baba naamai, izvi zvairatidza kuti amai vanokoshawo. (Zvirevo 6:20; 19:26) Ndizvo zvinofanira kuitwawo nevana mazuva ano.
Asi mutemo wekukudza vabereki une pawaigumira. Vana vaisatarisirwa kuteerera vabereki, chero mumwe munhu, kana kuteerera kwacho kwaizotyora mitemo yaMwari. (Dheuteronomi 13:6-8) Ndizvo zvazvakaitawo mazuva ano, vaKristu ‘vanoteererawo Mwari semutongi panzvimbo pevanhu.’—Mabasa 5:29.
Mwari akavimbisa vaIsraeri kuti kana vaizoteerera vabereki vavo ‘vaizorarama kwenguva refu uye vaizobudirira’ munyika yavaizopiwa naMwari. (Dheuteronomi 5:16) Vaisazorangwa sezvaiitwa vana vakanga vasingateereri mitemo yaMwari uye vaipandukira vabereki vavo. (Dheuteronomi 21:18-21) Zvidzidzo zvatinowana mumutemo uyu zvichiri kushanda nanhasi. (VaEfeso 6:1-3) Pasinei nezera redu, tese tinozvidavirira kuMusiki. Uye sezvaakavimbisa, vana vanomuterera uye vanoteerera vabereki vavo, vachararama upenyu hurefu. Vanotova netariro yekurarama upenyu husingaperi.—1 Timoti 4:8; 6:18, 19.
Mashoko akapoteredza Eksodho 20:12
Tinodzidzawo chimwe chinhu patinoongorora kuti mutemo uri pana Eksodho 20:12 wakaiswa pechingani paMitemo Gumi. (Eksodho 20:1-17) Mitemo 4 yekutanga yaitsanangura zvaifanira kuitwa nevaIsraeri kuna Mwari panyaya dzekunamata. Mimwe mitemo yaitevera yaitsanangura zvaifanira kuitwa nevaIsraeri kune vamwe vanhu, kusanganisira kuramba vakavimbika muwanano uye kusaba. Saka mutemo wekuti “kudza baba vako naamai vako” wakaita sebhiriji rinotiyambutsa kubva pamitemo yairatidza zvatinofanira kuitira Mwari tichienda pamitemo inoratidza zvatinofanira kuitira vamwe vanhu.
Verenga Eksodho chitsauko 20 pamwe chete nemashoko emuzasi uye mamamwe mavhesi anoenderana nearimo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Eksodho 20:12—“Kudza Baba Vako Naamai Vako”
Eksodho 20:12 Inotsanangurwa—“Kudza Baba Vako Naamai Vako”
ijwbv nyaya 7
Zvinorevei ‘Kukudza Baba Naamai Vako’?